MAHAJANGA : Nilaharana ny nanao sonia mitaky ny hialan-dRajaonarimampianina
Ny marainan’ny sabotsy teo dia nisy ny fanangonan-tsonia manoloana ny hotel de ville, itakiana ny hialan’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny toerana maha Filoham-pirenena azy. 8 mai 2018
Tafiditra anatin’ny hetsika ataon’ireo depiote 73 izy ity. Nahavita nilahatra mihitsy ireo olom-pirenena miandry ny anjarany. Hentitra izy ireo milaza fa tokony hiala amin’izay Rajaonarimampianina sy ny forongony fa leo kolikoly ny vahoaka, leo amin’ny fijaliana mihoapampana. Ny fidangan’ny vidim-piainana nefa ny karama zara raha miakatra, ny harin- karena tsy hita ary efa tsy zakan’ny vahoaka intsony.
Ankilany anefa Rajaonarimampianina sy ny mpiara-miasa aminy, miara-misaosy sy miliba amin’ny volam-bahoaka, hoy hatrany ny olona. Efa ela izahay no te-hitroatra fa tsy misy mitarika hoy kosa ny olona sasany. Hatramin’izay koa dia vao mainka miha sahirana ny vahoaka rehefa misy ny fitokonana. Fa tsy mbola niha tsara mihitsy ny fiainany, ka tolona ho amin’ny fiovana tena izy no tianay hatao, hoy kosa ny renim-pianakaviana iray.
« Tsy fanovana mpitondra fotsiny nefa ny fiainam-bahoaka mbola tsy hitraka no ilaina, hoy kosa ny raim-pianakaviana iray, fa mila antoka izahay fa hijery marina ny sosialim-bahoaka izay ho tonga eo fa tsy hanao tohatra fiakarana ny vahoaka fotsiny ». Mitohy ny tolona ary tsy mitsahatra raha tsy lavo Rajaonarimampianina, hoy kosa ny sasany ka anjarany mifidy na izy mivoaka amin’ny varavarana lehibe na izy hanao sesitany ny tenany. Hentitra ireo vahoaka tonga teny ary vonona ny hiady hatramin’ny farany.